Archdiocese of Mandalay blog: ဘားအံ သာသာနာအသစ် ပေါ်ထွက်ပြီ။
ဘားအံ သာသာနာအသစ် ပေါ်ထွက်ပြီ။
ဇန်နဝါရီလ (၂၄) ရက်နေ့က ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘဲနက်ဒက် (၁၆) မှ မြန်မာနိုင်ငံ ဘားအံဂိုဏ်းအုပ်သာသာနာသစ်ကို ရန်ကုန်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာမှ ခွဲထုတ်တည်ထောင်လိုက်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့လေသည်။ ထိုဘားအံသာသနာသစ်၏ ဆရာတော်ကို ရန်ကုန်းဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ လက်ထောက် ဆရာတော် ဂျက်စတင်း စောမင်းသိုက်ကို ခန့်ထားကြောင်း၊ ထိုသာသနာသစ်တွင် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ် တဝက်ပါဝင်ကြောင်း၊ ကယ်သီဒယ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ဘားအံမြို့ စိန်ဖရန်စစ်ဇေးဗီးယား ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ကယ်သီဒယ်အဖြစ် ထားရှိကြောင်း၊ ယင်းသာသနာသစ်သည် (၁၅ဝဝဝ) စတုရန်း ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းပြီး၊ လူဦးရေ (၁.၁)မီလျှံရှိသည့် အနက် ကက်သလစ်ဘာသာဝင် (၁ဝ၇၈၁)ယောက်၊ ဘုန်းတော်ကြီး (၁၂)ပါး၊ သီလရှင် (၃၁)ပါး၊ သာသာနာအုပ်စု (တိုက်နယ်) (၁၅)ခုပါဝင်ပြီး၊ ကိုရင်ကျောင်းသား (၉) ဦး ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။
(January 24, 2009) The Holy Father has erected the Diocese of Hpa-an in Myanmar, by withdrawing some territory from the Archdiocese of Yangon. The Holy Father has appointed the first Bishop of Hpa-an, Bishop Justin Saw Min Thid, Titular Bishop of Lemfocta and Auxiliary of the Archdiocese of Yangon. The new diocese of Hpa-an will include almost the whole state of Kayin and half of Mon State and will be dependent of the Archdiocese of Yangon. The new diocese has the area of 15000 sq km, withaPopulation of 1.1 million among whom 10,781 are catholics. It has 12 parishes, 31 religious, 15 diocesan priests and9seminarians
Vatican City (Agenzia Fides) – The Holy Father Benedict XVI, on January 24, 2009, erected the Diocese of Hpa-An (Myanmar), with territory taken from the Archdiocese of Yangon, making itasuffragan of the same Metropolitan See. The Holy Father appointed Bishop Justin Saw Min Thide, Titular Bishop of Lemfocta and Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Yango, Bishop of Hpa-An. The new Diocese of Hpa-An includes nearly the entire state of Kayin and half of the state of Mon, and isasuffragan of the Archdiocese of Yangon. The parish church in Hpa-An named after St. Francis Xavier will become the Cathedral for the new diocese. (SL) (Agenzia Fides 26/1/2009)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 8:25 PM
YouTube မှ ဗာတီကန် Channel
ဆွေသဟာ (YCCF) လက်ကမ်းစာစောင်
မေတ္တာရှင်ရ့ဲ့ စမ်းလန်းခြင်း